काठमाण्डौ । ओपोले डिसेम्बर १० का दिन चीनको शनचनमा पहिलो ओपो इन्नोडेको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘क्रिएट बियोन्ड बाउन्ड्रिज’ सिद्धान्तअन्तर्गत आयोजित हुने ओपो डेले फाइभजी युगमा अत्याधुनिक प्रविधि र सेवाहरुको ब्यापक तथा गहन एकिकरणका बारेमा प्रकास पार्ने प्रयत्न गर्नेछ । फाइभजी, एआई, क्लाउड, बिग डाटा लागायत अन्य अत्याधुनिक...
काठमाण्डौ । मिडिया, सृजनशिलता, मनोरञ्जन लगायतका लागि ओपो रेनोटू एक प्रिमियर सिरिज हो । यस पक्षमा रेनोटू एफको सिनेमा स्तरको श्रब्य गुणस्तर पनि कुनै पक्षमा कम छैन । रेनोटू एफमाप्रयोगकर्तालाई उत्कृष्ट श्रब्य अनुभव पस्किने सोचका साथ डल्बी एट्मस, ब्यवस्थित स्टेरियो स्पिकर्स र चार विशेष अडियो मोड लगायत अडियो फिचर्सको ब्यवस्था गरिएका छन् ।...
ओपोद्वारा नयाँ कलर ओएस सेवेन सार्वजनिक
काठमाण्डौ । विश्वकै अग्रणी स्मार्ट उपकरण ब्राण्ड ओपोले आफ्नो नयाँ कलर ओएस सेवेन भारतको नयाँदिल्लीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरेको छ । ओपोले, चीनभन्दा बाहिर एण्ड्रोइडमा आधारित आफ्नो सञ्चालन प्रणाली सार्वजनिक गरेको यो नै पहिलो पटक हो । नयाँ नारा “स्मूथ एण्ड डिलाइटफूल”का साथमा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक नयाँ कलर...
ओपो चिफ फाइभजी साइन्टिस्टः भविष्यको बौद्धिक समाजका लागि फाइभजी स्तम्भ हुने
काठमाण्डौ । गत नोवेम्बर १८ तारिखका दिन सीएनबीसीद्वारा क्वाङचोउ, चीनमा आयोजित बार्षिक टेक्नोलोजी फोरम ईष्ट टेक वेष्टमा ओपोका चिफ फाइभजी साईन्टिस्ट हेनरी ट्याङले औद्योगिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका अग्रणी प्राविधिक विज्ञहरुमाझ फाइभजीको भविष्य सम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए । “भाविष्यको बौद्धिक समाजमा फाइभजी एक प्रमुख...
ओपोको रेनोटू एफ सार्वजनिक, दमदार फिचर्सले सुसज्जित फोनको मूल्य रु. ४७ हजार
काठमाण्डौ । ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । रेनोटू एफ, ओपोको लोकप्रिय रेनो सिरिज अन्तर्गत भित्र्याइएको नयाँ संस्करण हो । प्रयोगकर्ताको रचनात्मकतालाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ यसमा प्रशस्त फोटोग्राफीमा सुधार ल्याउने फिचर्स उपलब्ध छन् । “रेनो सिरिजको रचनात्मक...
ओपोद्वारा नेपालमा ‘ए-सिरिज २०२०’ सार्वजनिक
काठमाण्डौ । वैश्विक रुपमै अग्रणी स्मार्टफोन ब्रान्ड ओपोले नेपालमा ‘ओपो ए सिरिज २०२०’ आजआधिकारिकरुपमा सार्वजनिक गरेको छ। ओपो ए सिरिज २०२० अन्तर्गत सार्वजनिक ओपो एनाइन २०२० र ओपो एफाइभ २०२० मध्यमवर्गिय स्मार्टफोन बजारका लागि ब्रान्डको नयाँ भेट हो । उच्च गुणस्तर र मितव्ययी मूल्यको समायोजनका साथै उत्कृष्ट फोटोग्राफी, आकर्षक डिजाइन...
काठमाण्डौ । ओपोले नेपालमा ए सिरज २०२० अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोनहरु सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिकको तयारीमा रहेका लोकप्रिय एसिरिज अन्तर्गतका उत्पादनहरुमा “एनाइन २०२०” र “एफाइभ २०२०” रहेका छन् । मध्यमवर्गीय स्मार्टफोन बजार लक्षित ओपोका सार्वजनिकको तयारीमा रहेका उत्पादनले उत्कृष्ट फोटोग्राफी दिनुका साथै...
ओपोको दशैं क्याम्पेन, मोवाइल किन्दा विदेश भ्रमणको अवसर
काठमाण्डौ । वैश्विक स्तरमै अग्रणी स्मार्टफोन ब्राण्ड ओपोले समस्त नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैँको अवसरमा ‘बडा दशैँ’ एसएमएस क्याम्पेन, विशेष उपहार योजनाको घोषणा गरेको छ । उपहार योजनाअन्तर्गत उपभोक्ताले क्याम्पेन अवधिभर फोनको आईएमईआई एसएमएस गरी योजनामा सहभागिता जनाई विभिन्न उपहार जित्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । ‘वैश्विक...
रुमाल झै पट्याउन मिल्ने मोवाइल ल्याउँदै ओपो, कहिलेसम्म आउला ?
काठमाण्डौ । थ्रीडी रेन्डर्स मार्फत ओपोद्वारा विकसित फोल्डिङ फोन (पट्याउन मिल्ने फोन) थप विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । ओपोद्वारा उत्पादित यी रेन्डर्स डब्ल्यूआईपीओ (वल्र्ड ईन्टेलेक्चसअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन)को साइटमा उपलब्ध छन् र हेर्न सकिन्छ । मोनोक्रोममा उपलब्ध यी थ्रीडी रेन्डर्सले बाहिरतिर पट्टिन सघाउने...
ओपोद्वारा एफ ११ ज्वेलरी ह्वाइट रंगमा सार्वजनिक, मूल्य रु. ३५,४९०
काठमाण्डौ । स्मार्टफोन ब्राण्ड, ओपोले आजबाट एफ११ लाई तेस्रो रंग “ज्वेलरी ह्वाइट”मा सार्वजनिक गरेको छ । पहिले मार्वल ग्रिन र फ्लोराइट पर्पल गरी दूई रंगमा सार्वजनिक गरिएको फोन कम्पनीले तेस्रो रंग ज्वेलरी ह्वाइटमा सार्वजनिक गरेको हो । यसको मूल्य कम्पनीले ३५ हजार ४ सय ९० निर्धारण गरेको छ । तेस्रो रंगमा सार्वजनिक नयाँ ओपो एफ११ले...
मोबाइलमा नेटवर्क छैन, नो टेन्सन : अब विनानेटवर्क ३ किलोमिटरसम्म कुराकानी
काठमाण्डौ । घर होस् वा अफिस मोबाइलमा नेटवर्क समस्याले हैरान पार्छ? कहीँ कतै घुम्न जाँदा बीच–बीच मोबाइलको नेटवर्क नै हराउँछ ? यी समस्या दिनहुँ आउने गर्छन् । कुनै पनि मोबाइल कम्पनी यस्ता समस्याबाट आम उपभोक्तालाई छुट्कारा दिलाउन सकेका छैनन् । तर अब मोबाइलमा नेटवर्क समस्याका विषयमा चिन्ता लिने दिनको अन्त्य हुँदैछ । एउटा चिनियाँ...
ओपोको रेनो १०एक्स जुम ईडिसन सार्वजनिक, मूल्य रु. ८९,९९०
काठमाण्डौ । ओपोले नेपालमा रेनो १०एक्स जुम ईडिसन सार्वजनिक गरेको छ । ओपोको नयाँ फ्ल्यागशिप रेनो सिरिजअन्तर्गतको यो फोन असार १५, आइतबारदेखि नेपाल उपलब्ध गरिएको हो । ओपो रेनो १०एक्स जुम ईडिसनको प्रमुख आकर्षण, यसको नामअनुसार स्वभाविक रुपमा १०एक्स लसलेस हाइब्रिड अप्टिकल जुम हो । ओपो रेनो १०एक्स जुम ईडिसनमा रहेको साइड–स्विङ...
काठमाण्डौ । नेपाली स्मार्टफोन बजारमा रहेको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई दृष्टिगत गर्दै, सदैव नवप्रबर्तनका लागि अग्रसर ओपोले उपभोक्ताको सर्वोप्रिय ब्राण्ड बन्ने उद्देश्यका साथ नयाँ योजना बनाएको छ । ओपोले भरखरै, रेनो सिरिज सार्वजनिक गर्दै आफ्नो आर सिरिज अन्तर्गतका फोनहरु ‘डिस्कन्टिन्यू’ गर्ने घोषणा गरेको छ । वैश्विक स्तरमै रेनो र...
ओपोद्वारा नेपालमा एफ११ प्रो सार्वजनिक, लो लाइटमा पनि उत्कृष्ट तस्विर खिच्नसक्ने
काठमाण्डौ । वैश्विक रुपमै अग्रणी स्मार्टफोन ब्राण्ड ओपोले आफ्नो एफसिरिज पोर्टफोलियो अन्तर्गत नेपालमा नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एक बृहत्त समारोहको आयोजनागर्दै आपो एफ११ प्रो सार्वजनिक गरेको हो । कम प्रकाश भएका स्थानमा समेत उत्कृष्ट तस्विर खिच्ने क्षमतालगायत अन्य नवप्रबर्तनात्मक प्रविधि फोनमा समाहित गरिएका...
कलर ओएस-६ सार्वजनिक, रोचक फिचर्स र आकर्षक डिजाइन
काठमाण्डौ । ओपोले आधिकारिक रुपमा स्मार्टफोन प्ल्याटफर्मको आफ्नो नयाँ भर्जन–कलर ओएस ६ सार्वजनिक गरेको छ । विश्वका केही बजारमा भरखरै सार्वजनिक ओपो एफ ११ र एफ ११ प्रोमा यो ओएस उपलब्ध गरिसकिएको छ । हल्का कलर स्किममा आधारित नयाँ ओएसले कार्य क्षमतामा परिस्कृतिकरण र एप ड्रअर पनि उपलब्ध गराएको छ । सफा र ब्यवहारिक दृष्यानुभवका लागि नयाँ...